Cishqi jaceyl qeybtii1-aad | Cishqi.com | Isha Arimaha Jaceylka
Erayo Jaceyl a-z
Cishqi Jaceyl qeybtii 1-aad
Cishqi jaceyl gaar ahaan cishqi Iyo colaad, markuu cishqi ku hayo waa ka duwan tahay dadka kale, Barwaaqo Qalanjo iyo cishqi tamaashaa xalqooyinka 10, 20, 39, 42.
Waxaan jecelnahay inaan tixgelino Codsi inoo yimid akhristayaasheena kaasoo ku saabsan inaan la wadaagno sheekooyin cishqi jaceyl ah ama qisooyin taxane ah kuwaasoo ku saabsan arimaha jaceylka.
Anigoo ah Saabiriin Sabnaa ahna waan idinla socod siin doonaa. Waan dareemi karayaa markuu ku hayo cishqi, waxaad xiiseyneysaa sheekooyinka jaceylka ah ama xittaa waxaa laga yaabaa inaad iska jeceshahay qormooyin ku saabsan arimaha jaceylka.
Qish: Halkaan kaga bogo calaamadaha jaceylka dhabta ah
Aniga qudheyda waxaan kamid ahaa dhalinta ku xiran Saafi Films, waxaana ka daawan jiray aflaanta jaceylka ah sida Ishqi hindi af somali iyo musalsalo jaceyl ah sida.
Cishqi iyo Colaad
Cishqi Tamaashaa 10
Cishqi Tamaashaa 20
Cishqi Tamaashaa 39
Cishqi Tamaashaa 42
Cishqi Tamaashaa 46
Cishqi Tamaashaa 49
Sidoo kale waxaan dhageysan jiray heestii cishqi by Barwaaqo Qalanjo iyo heeso kale oo jaceyl ah. Dabcan heestii iigu horeysay ee aan dhageysto heesaha ku saabsan cishqiga waxay ahayd heesta Waayaha Cusub ee Cishqi. Hadaba la soco sheekooyinkaan taxane ah oo aan halkaan idin kula wadaagi doono.
Qish: Baro Erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh
Wiil ayaa shukaansi la lahaa gabar had iyo jeer dhaawaceysay qalbigiisa ayaa maalin maalmaha ka mid ah ay isku dhaceen, weeyna kala tageen. Waxay ku tiri, “Weligay ma doonayo inaan dib kuu arko.”
Dhawr bilood ka dib, gabadhii qalbigeedu waa is beddelay. Waxayna garwaaqsatay inay wiilka weli jeceshahay, markaaseey dib u soo noqotay oo ku tiri, “hal fursad oo kaliya isii. Waan ku jeclahay waana kuu baahanahay.
Waxaan kuu balan qaadayaa inaanan markale ku dhaawici doonin” Laakiin wiilkii intuu qoslay ayuu ku yiri, “Doqon uun baa ceshan lahaa qof aad wax yeeleysay.
Gabadhii waxay dareentay rajo la’aan waxayna bilaawday iney ooyso, laakiin wiilkii intuu labadíisa gacmood kala furay ayuu laabta geliyay misana ku yiri “… oo anigu waxaan ka mid ahay nacasyadaas.”
Fariimo Jaceyl Ah Oo Macaan Qeybtii 1-aad
Dhambaal jaceyl xiiso badan qeybtii 1-aad
Erayo jaceyl ah oo soo jiidasho leh A-Z Qeybtii 1-aad
Shukaansi Bilow Ah Qeybtii Koowaad
Fariimo jaceyl dhab ah oo aad u macaan
Qof Aad Jeceshahay Sidaan Ma Kugu Sameeyay?
Isha arimaha jaceylka
Akhiriso Qormooyin kale oo kuu xiiso gelinayo
Top 10 Best Beaches in Somalia
Jidka Sodonka, Mogadishu, Somalia
Sidee ku noqon karaa akhristaha ugu horeeyo ee ku xiran Cishqi.com? Jawaabta: Geli halkaan hoose emailkaaga, kadibna riix ii soo dir. .
Noqo Akhristaha ugu horeeyo
Copyright © 2022 Cishqi.com